Xukuumada Somaliland oo Mashaariic Cusub ka Hirgelisay Gobolka Sool
Laascaanood (Dawan):- Xukuumadda jamhuuriyadda Somaliland ayaa mashaariic cusub ka fulisay xarunta gobolka Sool ee magaalada Laascaanood, waxaana halkaasi ku sugan wefti heer qaran ah oo uu hoggaaminayo wasiirka arrimaha gudaha Maxamed Kaahin Axmed, kuwaasi oo xadhiga ka jaray dhismeyaal dawladeed oo laga hir geliyay magaaladaas.
Dhismeyaasha weftiga xukuumaddu ay shalay xadhiga ka jareen ayaa ka koobnaa laba saldhig booliis oo cusub, isla markaana loo dhammaystiray qalabayntii ciidan ee ay ku shaqayn lahaayeen iyo dhisme lagu kordhiyay Xabsiga weyn ee magaalda Laascaanood.
Wefita heer qaran ee ku sgan gobolka Sool oo uu hoggaaminayo guddoomiyaha golaha wakiiladda Somaliland Baashe Maxamed Faarax oo ay socdaalka ku weheliyaan wasiirada arrimaha gudaha Somaliland Maxamed Kaahin Axmed, waxbarashada iyo Sayniska Prof: Yaasiin Maxamuud Xiir (Faratoon) taliye ku xigeenka ciidanka Booliska Somaliland Sarreeye Guuto Cabdiraxmaan liibaan Fooxle, ayaa shalay si rasmi ah u furay laba saldhig booliis oo casri ah oo laga dhisay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool oo loo dhammaystiray dhammaan qalabkii ay ku shaqayn lahaayeen ciidanka booliska ee ka hawl gelaya labada Saldhig iyo dhisme lagu kordhiyay Jeelka weyn ee magaalada Laascaanood oo dib u dhis lagu sameeyay.
Guddoomiyaha golaha wakiiladda Somaliland oo ka hadlay munaasibaddii furitaanka labada saldhig iyo dhismaha lagu kordhiyay xabsiga weyn,ayaa Madaxweynaha Somaliland uga mahad naqay saldhigyada cusub ee magaalada loo dhisay iyo qaybaha lagu kordhiyay xabsiga dhexe,waxaanu yidhi Guddomiyuhu isagoo arrimahaa ka hadlaya. “Madaxweynaha Somaliland waxaan uga mahad naqayaa dhismayaashan lagu soo kordhiyay magaalada Laascaanood waxaana nashqada sameeyay wasaarada hawlaha guud labada saldhig iyo dhismayaasha lagu soo kordhiyay jeelka magaalada Laascaanood,ciidanka booliska waxaan uga mahadnaqayaa sida ay usii diyaariyeen ciidanka joogi doona xafiisyadana waa la qalabeeyay.”.
Wasiir kaahin,ayaa isna sheegay in dhismeyaasha saldhiyada booliiska ee cusub ee magaalada Laascaanood laga hir geliyay in ay ka mid yihiin brnaamijka xoojinta nabad gelyada guud ee dalka gaar ahaan ta magaalada Laascaanood iyo gobolka Sool waxaanu intaa raaciyay in qaybo kalena lagu soo kordhin doono jeelka way nee magaalada. “Waa barnaamijkii xoojinta nabadgelyada gobalka Sool wax wayn ayaanay ka tarayaan dhismayaashani hawlihii nabadgelyada iyo ciidanka booliska ee ka hawl geli doona labada saldhig oo ah laba saldhig oo waawayn oo casri ah hawlaha nabadgelyada qaranka ayaana lagu xoojinayaa,qaybta kalena waxa lagu daray xabsiga dhexe ee gobolka Sool,waanan sii balaadhin doonaa xabsigan,”.
Ugu dambayn taliye ku xigeenka ciidanka booliska Somaliland Taliye Fooxle,ayaa sheegay in ciidanka boolisku mar walba u taagan yahay illaalinta nabad gelyda dadka iyo hantida reer Somaliland diyaarna u yihiin in ay mar walba waajibaadkooda qaran ee ciidan ahaan saaran in ay gutaan.
“Saldhig yadan waxaanu ku gudan doonnaa waajibaadkii ciidanka booliska loo aasaasay oo ah ilaalinta nafta iyo maalka dadka Somaliland, ciidanka booliskuna wuxuu ka hawl galaa dhamaan gobolada dalka nabasdgalyadana gacanta ayay ku hayaan.”.